တရုပ်ပြည်က မြန်မာ သင်္ကြန် ( ၂၀၁၀ )
သင်သေသွားသော် ၊ သင်ဖွားသောမြေ သင်တို့မြေသည် ၊ အခြေတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏ ။ [ဇော်ဂျီ ]
: at 4/11/2010 11:00:00 PM
ဘာလိုလို နဲ့ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ် တနှစ်ပြောင်းပြန်အုံးတော့မယ် ။ နှစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း လတန်ခူး မှာ ကြည်နူးရကြောင်း ကတော့ မြန်မာတို့ ရဲ့နှစ်ကူး သင်္ကြန် ပွဲတော်ကြောင့် ဆိုရင် ပိုတယ် မထင်ကြစေလို ။ အညစ်အကြေးတွေ ဘယ်လိုပေပေ ၊ အတာရေ နဲ့ ဆေးပါ့မယ် ဆိုပြီးတော့ သင်္ကြန်ရေတွေ ပက်ကြလေသတဲ့ ။ရိုးရာ မပျက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေ ပြုကြလေသတဲ့ ။
သင်္ကြန်ကျရခြင်း ရာဇဝင်ကို မခင်းလိုတော့ပါ ။ ( မှတ်မှတ်မိမိ နဲ့ သိခဲ့ခြင်းတွေလည်း သိပ်မရှိတော့၍ မခင်းပြနိုင်ခြင်းပါဟု ရိုးသားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အမှတ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ) ။ မြန်မာဟာ မြန်မာ ပါပဲ ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် တာသင်္ကြန်ပွဲကို တော့ အမှတ်ရနေကြမည်ဖြစ်ပါသည် ။ သို့ ဖြစ်၍ ဤနိင်ငံ ရောက် မြန်မာလူမျိုးများ နှင့် မြန်မာပြည်ဖွား တရုပ်နိုင်ငံသားများမှာလည်း သင်္ကြန်ပွဲကို ပြီးခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှ စတင်၍ နှစ်စဉ် အမှတ်တရ ကျင်းပကြလေသည် ။
ဤနိုင်ငံ အစိုးရမှလည်း ပင်လယ်ရပ်ခြား နိုင်ငံသားများအတွက် ပံ့ပိုးပေးသည် ။ မီးသတ် ၊ ရဲ ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ မြို့ နယ် ၊ ရပ်ကွက် မှ တာဝန်ရှိသူများ မှ အကူအညီ လည်းပေးသည် ။ဒီတော့ မြန်မာပြည်ဖွား တရုပ်အများစု နေထိုင်ရာ ထိုင်ပေ ၊ ကျုံးဟော် မြို့ မှာ ယနေ့(၁၁ ရက် ဧပြီလ ၂၀၁၀ ) မနက်ပိုင်းမှ စပြီး ညနေ ၄ နာရီအချိန်ထိ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲကို ကျင်းပကြသည်။ လူကြီး လူငယ် မရွေး ၊ ကလေး ရော ခွေးပါ ပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားကြသည် ။ ဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီးများမှငါးပါးသီလပေး၍ ဗုဒ္ဓဘုရားဆင်းတုတော်အား ရေသပ္ပါယ်ကြပြီး၊ အဆို အက ၊ မုန့်ဈေးတန်း ၊ မဲနှိုက်ပွဲ ။စသဖြင့် ပါဝင်သော သင်္ကြန်ပွဲ အကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဖေါ်ပြလိုက်ပါသည် ။
ဒါကတော့ မြန်မာအက နဲ့ နွေမ ။ သီဆိုပေးသူကတော့ ခုတလော Super Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ နာမယ်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာပြန်လူငယ် ကျောက်ထိုက်ရှန်ပါ ။
နှစ်သစ်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံသားအားလုံး လွတ်လပ်စွာ ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီး အေးချမ်းသာယာ တိုးတက်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါသည် ။
:kiki : at 4/11/2010 11:00:00 PM
အဖြူရောင်နတ်သမီး said... | Monday, April 12, 2010 1:53:00 AM
အိုက်ခီလောက် said... | Monday, April 12, 2010 2:25:00 AM
ဒါနဲ့ နင် ဘယ်တော့ တိုနှံနှံလေးတွေရိုက်ပြီး တင်မှာတုန်း
မေဓာဝီ said... | Monday, April 12, 2010 2:28:00 AM
တရုတ်ပြည်သင်္ကြန်လဲ စည်တယ်နော်။ ကျမကတော့ ဘယ်မှမသွားနိုင်လို့ သူများပျော်တာလေးတွေပဲ ထိုင်ကြည့်နေရတယ် မကိရေ။
ဒါနဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့ ကျောက်ထိုက်ရှန်က မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်ကလေးလား။ သူဆိုတာ ကောင်းသားပဲနော်။
မကိရဲ့ ဆုတောင်းအတိုင်း ဖြစ်ပါစေလို့ ထပ်ဆင့် ဆုတောင်းသွားပါတယ်။
Anonymous said... | Monday, April 12, 2010 6:24:00 AM
ကိကိ ရေ .. မင်္ဂလာ ရှိသော သင်္ကြန် ဖြစ်ပါစေ ...
အဆိုတော် အသံကောင်းတယ် .. ဒါပေမယ့် မျက်မှန်ကြီးနဲ့မို့ ချောမချော မသိရဘူး ... က တဲ့ သူလည်း အက ကောင်းတယ် ... ချစ်စရာ လေး နော် ...
ကိကိဘလော့ ကို စ ပြီး သိတာ မနှစ်က ဒီလိုအချိန်
သင်္ကြန်ပုံ တွေ တင် တာ လာကြည့် ပြီး မှ သိရ တာမို့
တနှစ်ရှိသွားပြီ ... နိုင်ငံတကာ က သင်္ကြန်ပုံတွေ ကြည့်ရတာ ကြိုက်တယ် ... ကျေးဇူးပါနော် ...
ahphyulay said... | Monday, April 12, 2010 7:09:00 AM
သူတို့ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်မှ ပိုစည်လာတော့ တယ်။
ဒါပေမဲ့ပိတောက်က မြန်မာပြည်မှာပဲ ပွင့်နေတာ ။
Anonymous said... | Monday, April 12, 2010 7:31:00 AM
ကိုယ်ကတော့ သင်္ကြန်ဆိုရင် ရိပ်သာပဲလွမ်းတယ်.
ဒါပေမဲ့ ရိပ်သာကထွက်ရင်တော့ ကလေးတွေယိမ်းအကတို့ ဘွားဘွားတို့ကတဲ့ယိမ်းကို သိပ်လွမ်းတာ..
Sint Si said... | Monday, April 12, 2010 9:30:00 AM
Thank you for sharing. Happy Myanmar New year!
လသာည said... | Monday, April 12, 2010 9:55:00 AM
သူများတွေပျော်နေတာမြင်တော့ ကိုယ်ပါ ရောပျော်လာပြီ..။ တရုတ်သင်္ကြန်ပျော်စရာကြီးနော်..
သင်္ကြန်မှာ ကိကိကိုပဲ ရေလောင်းချင်တာ..။ ရေလောင်းမယ် ရေလောင်းတယ် ပွမ်း ဗွမ်း.. :D
sonata-cantata said... | Monday, April 12, 2010 10:15:00 AM
~ဏီလင်းညို~ said... | Monday, April 12, 2010 10:58:00 AM
ရေလည်းလောင်းသွားသေးတယ်.........။ ဗွမ်းးးးးး.......... ဗွမ်းးးးးးးးးးးးးးးး.............း))
rose of sharon said... | Monday, April 12, 2010 1:34:00 PM
ပျော်စရာကြီးနော်... ရေကတော့ လူချင်းတွေ့မှလောင်းချင်တာ
သုဒြေ္န said... | Monday, April 12, 2010 7:02:00 PM
ဗျိုးမကိမပြေးနဲ့လိုက်လိုက် ဖမ်းထား အိုးမဲသုတ် ခွက်စောင်းခုတ် ရေဘူဖေါင်းနဲ့ ပစ် ဖလားကြီးနဲ့ လောင်း စည်ပိုင်းထဲနှစ် မီးသက်ပိုက်နဲ့ ပတ် ရေကန်ထဲတွန်းချ မုန့် လုံးရေပေါ်အတင်းခွန့်ချုပ်ထားကွာ ဘီယာနဲ့ လောင်း မှို့ နဲ့ ပွတ် ဘာကျန်သေးလဲဟင်မကိ မောထာ မကိဆုတောင်း သလိုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် မြန်မာပြည်ကြီး အေးချမ်းသာယာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ပါစေကြောင်းဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ် ဘော်ဘော် သုဒြေ္န
Anonymous said... | Monday, April 12, 2010 10:55:00 PM
ကျေးဇူးပါ မကိ။ မလာနိုင်လို့ ပုံလေးတွေကြည့်ရတာနဲ့တင် ပျော်တယ်။
sosegado said... | Monday, April 12, 2010 11:16:00 PM
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Monday, April 12, 2010 11:17:00 PM
သူ တစ်ယောက်ထဲ သွားကဲ နေတာကိုးးး။
ပျော်ရွှင်စရာတွေ လုပ်ထားပေမယ့် ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ မဟုတ်လို့ ခဏ ရပ်ကြည့်ပြီး ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။
မကီလည်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
သုခုမလေဒီ said... | Tuesday, April 13, 2010 1:18:00 PM
ဟိဟိ မိပြီး)))
ကိုရင်နော် said... | Wednesday, April 14, 2010 9:11:00 AM
ကိုယ့်မြန်မာ အဆိုအကလေးကို သူများတွေ စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြတာ ကြည်နူးစရာပဲ..
ကျောက်ထိုက်ရှန် သီချင်းဆိုတာတွေ ဘယ်မှာ ကြည့်လို့ ရနိုင်မလဲ..
အင်ကြင်းသန့် said... | Wednesday, April 14, 2010 12:32:00 PM
မမကိကိရေ...ကြည့်ရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လျှောက်လည်တာတွေ သတိရသွားပီ :(((
kiki said... | Wednesday, April 14, 2010 8:59:00 PM
ကိုရင်နော် --- ကျောက်ထိုက်ရှန်က မြန်မာပြည် မှာ လည်း သီချင်းခွေ ထုတ်ဖူးတယ် ပြောသံကြားပါတယ် ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီက Super Idol သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲ မှာ နာမယ်ကြီး နေတဲ့မြန်မာပြည်ဘွား တရုပ်လူငယ်လေးပါ ။ သူ့ သီချင်းပြိုင်ပွဲ ဝင် ထားတာ တွေ ကို ဒီလင့် နဲ့ အပါအဝင် တွေမှာ ကြည့်ရှု အားပေးနိုင်ပါတယ် ။
လည်လည်လာကြသူ မောင်နှမ မိတ်ဆွေများ အားလုံး နှစ်သစ် မင်္ဂလာ ပါ ...
yanmyo said... | Friday, April 16, 2010 10:48:00 AM
နောက်ပြီး သီချင်းဆိုတော့ရော က တာရော ကောင်းတယ်၊ ငယ်ငယ်ကဆို စင်ရှေ့မှာကပြီးသားဘဲ..၊
ယခု ကြွလာမိတ်သဟာ ချမ်းသာ ကိုယ်စိတ် မြဲပါစေ။ ကျေးဇူး အထူး တင်ပါသည် ။
မချစ် မမုန်း၊ အကောင်းဆုံး
မချစ် မမုန်း၊ အကောင်းဆုံး ။
မုန်းသောသူတို့ နှင့်လည်းမပေါင်းလင့် ။
ချစ်သောသူတို့ ကိုမမြင်ရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။ မုန်းသောသူတို့ ကိုမြင်ရခြင်းသည်လည်း
ထို့ ကြောင့် လူကိုဖြစ်စေ
ချစ်ခင်စွဲလန်းခြင်းကို မပြုရာ ။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းမရှိသောသူတို့ အား
အနှောင်အဖွဲ့ တို့ သည် မရှိကြကုန် ။
(ဓမ္မပဒ ၊ ဝိယပဂ် ၊ တယောဇန ပဗ္ဗဇိတ ဝတ္ထု )
ဧရာဝတီမြစ်ရှိ ဆည် စီမံကိန်းများလုံးဝ ဖျက်သိမ်းပေး..
ကိုယ် စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြ ပါစေ..
မြန်မာပြည် နှင့် ဧရာဝတီ တွင်
အကောင်း နဲ့အဆိုး ။
“တန်ရင်ဆေး၊ လွန်ရင်ဘေး ”လို့ ဆိုရိုးစကား ရှိပါတယ် ၊ဆေးဆိုတာ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ လိုအပ်သလောက်အချိန်အဆ အတိုင်း သာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ် ။ဆေးဆိုတာ...
ဗိုက် ပြသနာ ဘယ်လိုရှာ....
ခန္ဓာကိုယ်တခုမှာ ဘယ်အင်္ဂါ က အရေးအကြီးဆုံးလည်း ။ ရှိရှိ သမျှ အင်္ဂါတွေအားလုံး သူ့ နေရာနဲ့သူ အရေးကြီးကြတာချည်းပါပဲ ။ ဦးနှောက်အာရုံကြောတွေ၊ သွေးလှ...
ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတခု.. ဆိုတော့ ဖြစ်စေချင်တာတွေ ကို ဖေါ်ထုတ်ရေးသားမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတခုပါပဲ ။ ခံစားချက်ခြင်း မတူကွဲပြား ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ...
လင်ဇီးဆိုပြီး အထင်ကြီးနေကြသူများ အား မတင်မစီ်းလေးပြောကြားချင်ပါတယ် ။ ထို့ အတူ ဂါနိူ ရဲ့အညာပိုတာလေးတွေ သေချာရေရာအောင် ကြော်ငြာစာလေးရေးပေးလ...
ကြပ်ပြေး-ကြမ်းပိုး ပေးပို့သည် အိမ်သာပြင်လိုက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးထံ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းပါ နေပြည်တော်က ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ထားတ...
နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ။ နေမကောင်း ၊ နက်မကောင်းလို့လိုင်းမဝင်ရ ၊ ဖဘ အိမ်လည်မထွက်ဖြစ်တာ ၂ရက်ရှိသွားပြီ။ နှစ်ဟောင်းကုန်ခါနီး...
ကြောက်ဖို့ မလိုတော့တဲ့ သည်းခြေကျောက်
ကြောက်ပါတယ် ကျောက်ရယ် .... ကလင် .. ကလင် .. ကလင် .... “ အစ်မရေ .. သမီး ဗိုက်အောင့် နေပြန်ပြီ၊ ဗိုက်လည်းကယ်တယ် ၊ တညလုံး မအိပ်နိူင်ဘူး ။ လုပ်ပါ...
ဒီကင်ဆာလည်း ကာကွယ်လို့ ရပြီ
ကင်ဆာရောဂါ လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကြားလိုက်ရတဲ့ လူတိုင်း ထိတ်လန့် သွားတတ်ကြတယ် ။ ဒီရောဂါ နာမယ် အတပ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူနာ နဲ့ သူ့ ရဲ့နီးစပ်ရာ အရင်း...
ပုခုံးဆစ်ရယ်က တဖြစ်ဖြစ်ကိုက်တယ်ကွဲ့ ..
စာရေးရမှာ ပျင်းတာရော ၊ ရေးဖို့ ရာ အကြောင်း ထူးထွေ မရှိတာကြောင့် ရော ဘာ ပို့စ် မှ မရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီင်္ ပေါ့ ။ နောက် အကြောင်းတရပ်ကတော့ ညောင...
ဟိုနာ ဒီနာ လေးဘက်နာ ...
အိုး မိုင်ဂေါက် မှာ လူလည်းဂေါက်တောက်တောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ။ စကားလုံးဆင်းရဲတဲ့ ဖွားကိ တယောက် မြန်မာဖြစ်ပြီး မြန်မာလို မခေါ်တတ်တဲ့ ရောဂါ အများ အြ...
အို့ဟိုး ... ဒါကြောင့်ကိုး (၂)...
အို့ ဟိုး ။ ဒါ့ကြောင့်ကိုး(၁). ..
များများပြောပြီး နည်းနည်း နားထောင်..
အိုး မိုင် ဂေါက် ...
ကြောင်သတ်သမား ထောင်ကျခြင်း ။
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို.... (31)
ပေါချာချာ အတွေးများ (26)
my feelings (25)
my gozzips (20)
ယုံချင်ယုံ ၊ မယုံချင်နေ (17)
thinn gyan (11)
တီထွင်ဆန်းသစ် ဆေးပညာ . (11)
ရင်နင့်ဖွယ်ရာ အဖြစ်များ (9)
about death (8)
poem lolo (7)
ဖွားကိပြောသော ပုံပြင်များ (4)
မွေးနေ့ဆုတောင်း (4)
လေးစားမိတဲ့သူနဲ့ အကြောင်းအရာ (3)
ဝေဒနာ ကဗျာများ (2)
မြို့တော် သတင်း (2)
to Mom (1)
KiKi-Idiotlove © 2012-2013
template design by : urangkurai